Wax ka ogoow dhacdooyinkii laga bartay Horyaalka soomaaliya wareegga koowaad %
Jimcihii ayaa la cayaaray mid kamid ah kulamadii ugu dambeeyay ee wareegga koowaad ee horyaalka Soomaaliya, ee sannadkan magaciisu ahaa (Somali Premier League).
Kooxo kala duwan ayaa kasoo muuqday, kuwa ayaa dadaalkoodu gaarsiiyay in ay gaaraan heer ka duwan kii sannadkii hore, halka kuwa kalana ka gaabiyeen sidii ay ahaayeen kalkii hore.
Gelin kasta iyo wixiisa gaarka ah, sannadkan iyo waxyaabihii cajiibka ahaa; Dekedda oo ah kooxda heysata horyaalka ayaa markanna hoggaanka qaab gool sareyn ah ku heysa, waa u sharaf iyo Horseed oo daljire majaraha uu u hayo ay meel fiican tiigsato, Elman gaabis bay sameyneysaa, halka Banaaddir iyana rejo ay weli ka qabto markale in ay horyaalka dhagaha ku dhegto.
Adduun iyo ayaankiis, Feysal xasan Xaashi Iyo Anwar Shakundda ayaa min 9-gool shabaqa taabsiiyay, una tartamaya gool dhalinta horyaalka, kulamada soo aaddan iyo waxa laga filan karo.
Qaabka uu horyaalka noqon karo iyo sida la rejeynayo, warbixintan ayaan wax badan kaga gorfeyn doonnaa waxyaabihii laga bartay qeybtii hore ee horyaalka Somali Premier League.
Haddaba ka bogasho wacan.
1-Waxyaabaha laga diiwan galiyay wajiga hore waxaa ugu waa weyn ayaa ah kooxda Elman iney aad u liidatay iyado la kulantay 5-guul daro ah taa uu ka dhigan in ay tahay kooxda saddexaad ee guul darooyinka badan la kulantay wajiga hore ee qeyb ka ah kooxaha loo saadalinayay horyaalka,waxaana sido kale ku jira kooxaha Gaadiidka 5-guul daro soo gaartay halka Waxool ay tahay kooxda ugu badan guul daro dhabarka loo saaray waxeyna la kulantay 6- guul daro.
2-Wajiga Hore ee Horyaalka waxaa la bixiyay karaka Roosaha Ama Casaanka 15- kaar taa uu ka dhigan in ay qaateyn 10-ka kooxod ee ka qeyb galayo horyaalka Somali Premier League.
3-Jaalihii ugu horeyay ee horyaalka wajiga hore waxaa qaatay xidiga daafaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Dekedda kaa oo lagu magacabo Axmed Cali Kuur, wuxuuna qaatay kulankii furitaanka horyaalka ee kooxdiisa La ciyaartay naadiga Waxool.
4-Gooldhalinta horyaalka sanadkan waxaa isku heesta xidigaha kala ah Feysal Xasan Xaashi, Anwar Shankunda oo wada hel min 9-gool sido kale kaalinta saddexad waxaa ku jira weeraryahanka kooxda Banadir ee Cabdiqaadir Eenow Bentike oo leh 8-gool, Maxamed Cusman oo ka tirsan kooxda Elman ayaa leh 5-Gool, xidigaha kala ah Niyanzi Ronaldo, Xasaasi, Moha iyo Xasan Santos oo wada leh min 4-Gool sido kale waxaa jiro xidigo kale ee goolal dhaliyay balse kuwan waa tartamayasha gooldhalinta.
5- Garsoore Maxamed Somali ayaa bixiyay Roosihii ugu badnaa wajiga hore ee horyaalka wuxuna bixiyay 7-kaar Casaan ah halka kaalinta 2-aad uu ku jiro Garsoore Cumar Cartan kaa uu bixiyay 4- Kaar Casaan sido kale Xasan Baari ayaa bixiyay 2-kaar waxaa min hal wada bixiyay garsoorayasha kala ah Suleyman Sheekh Bashiir iyo Siyaad .
6-kooxdaha Elman iyo Waxool ayaa wajiga hore laga dhaliyay goolasha ugu badan Elman waxaa laga dhaliyay 20-gool halka Waxool shabaqadeyda la soo taabtay 21-gool.
7-Ma Ogtahay Feysal Xasan Xaashi in kooxdiise hore uu ku soo baxay ee Jeenyo markii uu ka horyimid is araga hore ee horyaalka xili ciyaareedkan in uu labo jeer soo taabtay shabaqeyda yacni labo gool ka dhaliyay kooxdiise Jeenyo balse xushmad u muujiyay.
8- Garsoore Maxamed Somali ayaa dhaxdhaxdiyay kulamadii ugu badna ee horyaalka wuxuuna dhaxdhaxaadiyay 9-kulan halka Garsoorayasha kala ah Xasan Baari iyo Cumar Cartan ay dhaxdhaxaadiyen min 8-kulan.
9- Roosihii ugu horeyay waxaa qaatay xidiga khadka dhexe ee kooxda Waxool Mursal Xuseen Aadan wuxuuna qaatay kulankii furitaanka horyaalka.
10- Banadir Sports Club ayaa ku dhibaatoneysa iney guul ka gaarto kooxda Dekedda sanadkihii ugu dambeyay iyado wajigii hore guul daro kala soo kulantay wiilasha Dekedda.
11- Goolkii ugu horeyay ee horyaalka sanadkan waxaa dhaliyay xidigii ku soo ifbaxay tartankii maamul Goboleeda kaa oo u ciyaarayay xulka Gobolka Banadir waa Cabdimajiid.
12- Daafaca kooxda Banadir Sports Club Ciise Cabdiqaadir ayaa iska dhaliyay wajiga hore ee horyaalka Own Goolkii ugu horeyay ee horyaalka.
13- Madaxweyna Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Mudane Cabdiqani Saciid Carab iyo ku Xigeenkiisa Mudane Cali Shiine ayaa kulan walbo u soo daawasho tage jiray wajiga hore ee horyaalka iyago heegan ku ahaa Garoonka Banadir Stadium.
14- Caawintii ugu horeysay ee wajiga hore Horyaalka sanadkan waxaa sameyay Xidiga Khadka dhexe ee kooxda Dekedda Cabdikariin Qubaaye kaa uu caawiye ka ahaa goolkii uu dhaliyay Cabdimajiid waana kulankii furitaanka horyaalka.
15- Saddexleydii ugu horeysay ee horyaalka waxaa dhaliyay weeraryahanka kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan Niyanzi Ronaldo wuxuuna ka dhaliyay kooxdiise hore ee Elman.
16- Naadiga Batroolka Noqotay Kooxda barbaraha ugu badan gasha Horyaalka waxayna barbaro gashay 5-jeer.
17- Dekedda iyo Horseed ayaa ah Kooxaha wajiga koowaad ee horyaalka laga dhaliyay goolasha ugu yar, kaliya waxaa laga dhaliyay min laba gool, halka Madbacada ay tahay kooxda dhalisay goolasha ugu yar horyaalka waana Afar gool, sagaal kulan oo ay ciyaartay.
18- Kooxda Waxool FC ayaa noqotay Kooxda ugu dhibcaha yar Horyaalka Soomaali Premier League, waxayna lee dahay kaliya 5-dhibic.
FG: Wey jiraan waxyaabo kale ee laga bartay waijga hore ee horyaalka balse 18-kan ayaa ah kuwa ugu muhiim